Ciyaar Cusub oo Fasalka Sage ah Hadda waxaa laga heli karaa Mobile Desert Black
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Ciyaar Cusub oo Fasalka Sage ah Hadda waxaa laga heli karaa Mobile Desert Black
Pearl Abyss ayaa maanta ku dhawaaqday in fasalka cusub ee xiisaha leh ee Sage uu hadda diyaar ku yahay Mobile Desert Mobile. Toddobaadkan, Adventurers waxa kale oo ay sugi karaan nuxurka ciyaarta cusub ee Atumach Skirmish, halkaas oo 25 ciyaartoy la geeyey kooxo shan ah si ay ugu tartamaan abaal-marin.
Sage, kii u dameeyay, waa dabaqad nooc-caster ah iyo sayid meel iyo wakhti oo soo saarta awooda la yaabka leh, wax dumisa. Isagoo u haysta Kyve-cube-u-qaabeeya inuu yahay hubkiisa ugu weyn, waxa uu furfuraa meelo bannaan oo wuxuu ku baaqayaa Ator's Energy iyo soo diyaarsanaan sixir weerar ah oo xooggan.
Awoodiisa gaarka ah waxay u oggolaan doontaa Adventurers inay tijaabiyaan isku-dhafka xirfadaha oo ay helaan habab gaar ah oo ay ku helaan gacanta sare xaaladaha dagaalka ee kala duwan. Hubka-hoosaadka, Talisman, ayaa sidoo kale awood u siinaya Sage inuu qaato qaab socodka bilaashka ah oo uu ku socdo xawaare cajiib ah iyada oo loo marayo marinnada.
Xirfadaha Sage waxaa ka mid ah
Silsiladda Rift: U fur portal cabbir kale adigoo dhigaya Kyve meel u dhow cadawga, ka dibna dib u celiya Kyve si aad u xirto marinka oo ay u dhaawacdo cadowga.
Xukunka Ator: Ka yeedh awoodda Ator xagga sare, ka dibna u soo dir inay ku burburto cadowga.
• Wormhole: Jidhkaaga geli meel bannaan oo ku meel gaar ah ee Kyve si aad si badbaado leh ugu socoto masaafo gaaban.
• Spatial Shatter: Waxyeelo wayn u gaysta cadawga adiga oo baabi'inaya meesha bannaan ee ku hareeraysan.
Si loo dabaaldego sii deynta Sage, dhacdo heer sare ah oo faa'iido leh ayaa dhacaya ilaa Noofambar 29. Adventurers kuwaas oo kor u qaaday Sage ilaa heerka 70 waxay heli doonaan abaal-marinno qiimo leh sida 1000 Black Pearls, Tier 7 Pet iyo Lebis Halyeeyga ah ee Set Chest.
Ugu dambeyntii, kuwa jecel ciyaaraha iskaashatada tartanka hadda waxay ku raaxaysan karaan dhacdada Atumach Skirmish, goob dagaal halkaas oo 25 Adventurers lagu meeleeyay 5 qaybood oo ka kooban 5 qof. Kooxaha ayaa markaas iska hor imanaya iyadoo ciyaartu ay dhammaanayso marka King Griffon laga adkaado. Dhammaadka Iskahorimaadka, ka qaybgalayaashu waxay kasban karaan Atumach's Seals oo ay ku beddelan karaan abaalmarinno.